က Tiger Woods '' စံချိန်တင်အဓိက: နိုင်ပွဲများ, အချက်အလက်နဲ့ Stats ကတော့
အများစုထဲမှာက Tiger Woods
အနိုင်ပေး, Plus အားဝုဒ် '' ဗိုလ်မှူးချန်ပီယံရှစ်စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းအခြားအချက်အလက်နဲ့ Stats ကတော့
အောက်တွင်က Tiger Woods '' ဗိုလ်ကြီးအတွက်အနိုင်ပေးပေါင်းဂေါက်သီးရဲ့အဓိကချန်ပီယံ၌သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုအချက်အလက်များနှင့်စာရင်းဇယားများ၏စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဒဏ်ရာအားဖြင့်နှောငျ့, ဝုဒ်, ဒုတိယ All-အချိန်ရဲ့ 2008 ခုနှစ်ကတည်းက 14 ကိုအဓိကချန်ပီယံကိုအနိုင်ပေးအပေါ်ဂျက် Nicklaus နောက်ကွယ်မှလေးကိုအနိုင်ပေးနှင့်တတိယနေရာမှထက်နောက်ထပ်သုံးမှီဝဲခဲ့သ Walter Hagen ။ (ထိုအထဲက Check အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဗိုလ်ကြီးစာရင်း ဝုဒ်သည်အခြားစပ်လျဉ်းအဆင့်နေရာကိုကြည့်ရှုရန် All-အချိန် greats ။ )
သင်တို့သည်လည်းအားလုံး၏စာရင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် က Tiger Woods '' ကိုအနိုင်ပေး , ဗိုလ်ကြီးနှင့်မဟုတ်ရင်။
သက်ကရာဇျစဉျအမိန့်ထဲမှာဝုဒ် '' 14 အဓိက
1997 မာစတာ : တွမ်စွန်ကျော် 12 လေဖြတ်ခြင်းဖြင့် Won, အငယ်ဆုံး Champ အဖြစ်နှင့်အောင်ပွဲ၏အကြီးဆုံး margin နဲ့နိမ့်ဆုံး 72-ပေါက်ရမှတ်များအတွက်မှတ်တမ်းများထားကြ၏။
1999 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ : တယောက်လေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဆာဂျီယို Garcia က Beat ။
2000 အမေရိကန်ပွင့်လင်း : ရှေ့ဆက်ပြေးသမား-up, Miguel Angel Jimenez နှင့် Ernie Els ၏ပြီးဆုံး 15 ရိုက်ချက်များ။ အမှတ်ပေးစံချိန်ချည်ထား, margin-of အောင်ပွဲစံချိန် ထား. တန်းတူအောက်မှာအမေရိကန်ပွင့်လင်းကို double-ဂဏန်းပြီးဆုံးရန်ပထမဆုံးဂေါက်သီးဖြစ်ခဲ့သည်။
2000 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း : ပြီးဆုံး 8 ရှေ့ဆက်ပြေးသမား-up, သောမတ်စ် Bjorn နှင့် Ernie Els, 1900. အဆိုပါအသက် 19-အောက်မှာနောက်ဆုံးရမှတ်ကြောင်းအချက်မှာဂေါက်သီးသမိုင်းထဲမှာနိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကအကြီးဆုံးကအနိုင်ဂိုးအနားသတ်ထားခြင်း၏။
2000 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: 3-ပေါက် PLAYOFF အတွက်ဘော့မေလ Beat ။ 18-အောက်မှာတန်းတူမှာပြိုင်ပွဲအမှတ်ပေးစံချိန်သတ်မှတ်မည်။
2001 မာစတာ : ပြေးသမား-up, ဒါဝိဒ်သည် Duval2ရှေ့ဆက်။
2002 မာစတာ : Retief Goosen ကျော်3Won ။
2002 အမေရိကန်ပွင့်လင်း : ဖီးလ် Mickelson ကျော်3Won ။
2005 မာစတာ: ရုတ်တရက်သေခြင်း PLAYOFF ၏ပထမဦးဆုံးအပေါက်ပေါ်ခရစ် DiMarco Beat ။
2005 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း : ဖြစ်သူ Colin Montgomery ကျော်5Won ။
2006 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း : ခရစ် DiMarco ကျော်2Won ။
2006 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ : Shaun Micheel ကျော်5Won ။
2007 ခုနှစ် PGA Championship ပြိုင်ပွဲ:2လေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဒါရိုက်တာ Woody Austin Beat ။
2008 အမေရိကန်ပွင့်လင်း : PLAYOFF ၏ 19 တွင်းပေါ်မှာ Rocco ဖျန်ဖြေ Beat ။
ဝုဒ်ဗိုလ်ကြီးမှာသုံး PLAYOFF အတွက်ကစားအပေါင်းတို့နှင့်သုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ကြီးအတွက်ကျားအားဖြင့်နှစ်ခုအောင်မြင်မှုရှိပါတယ်။ "ကျား Slam" သူ့ 3-Win ရာသီနှင့် 2000 ခုနှစ်တွင်ဝုဒ်အစဉ်အဆက်တူညီသောပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗိုလ်ကြီးသုံးယောက်အနိုင်ရရုံဒုတိယဂေါက်သီးဖြစ်လာအမေရိကန်ပွင့်လင်း, ဗြိတိသျှပွင့်လင်းခြင်းနှင့် PGA Championship ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ( ဘင် Hogan , 1953 ခုနှစ်တွင်, ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ) ။
အဓိကသူ၏စတုတ္ထဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိ: ဝုဒ်ထို့နောက် 2001 ၏ပထမဦးဆုံးအဓိက, ကအဆိုပါမာစတာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သူတစ်ပြိုင်နက်အားလုံးလေးယောက်အဓိကချန်ပီယံဆုဖလားကျင်းပဆိုလို - "။ ကျား Slam" အဲဒီလုပ်ဖို့အစဉ်အဆက်တစ်ခုတည်းသောဂေါက်သီးနှင့်ဘာအဖြစ်လူသိများသည်
အဆိုပါမာစတာ: 1997 ခုနှစ် Won, 2001, 2002, 2005
အမေရိကန်ပွင့်လင်း: 2000, 2002, 2008
ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: 2000, 2005, 2006
PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: 1999, 2000, 2006, 2007
ဝုဒ်အသက် 24 မှာ 2000 ဗြိတိန်ပွင့်လင်းအနိုင်ရခဲ့သည့်အခါသူကပြီးစီးခဲ့ အလုပ်ရှာဖွေရေးက Grand Slam ကြောင့် feat အောင်မြင်ရန်ပဉ္စမဂေါက်သီးနှင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အငယ်ဆုံး - ။
အဓိကဝုဒ် '' ဒုတိယနေရာ Finish
2002 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ : Rich Beem နောက်ကွယ်မှပြီးဆုံးတဦးတည်းလေဖြတ်။
2005 ခုနှစ်အမေရိကန်ပွင့်လင်း : မိုက်ကယ်ကမ့်ဘဲလ်မှ2ပျောက်ဆုံးနေတဲ့။
2007 ခုနှစ်မာစတာ : Zach ဂျွန်ဆင်မှ2ပျောက်ဆုံးနေတဲ့။
2007 ခုနှစ်အမေရိကန်ပွင့်လင်း : အိန်ဂျယ် Cabrera 1 မှလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့။
2008 မာစတာ: ပြီးဆုံး3ရိုက်ချက်များ Trevor Immelman နောက်ကွယ်မှ။
2009 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: Ye ယန်မှ3ပျောက်ဆုံးနေတဲ့။
ကျားရဲ့ထိပ်တန်း 5s နှင့်ထိပ်တန်း 10s အဓိက
ဒါကအဓိကချန်ပီယံ 30 ထိပ်တန်း5ချောတစ်ဦးစုစုပေါင်းပါပဲ။ (2000 ခုနှစ်, (ထိုမာစတာမှာ 5th, 1st, 1st, 1st, အသီးသီးအမေရိကန်ပွင့်လင်း, ဗြိတိသျှပွင့်လင်းခြင်းနှင့် PGA Championship ပြိုင်ပွဲ,) နှင့် 2005 ခုနှစ် 1-2-: ဝုဒ်နှစ်ကြိမ်ထိုနှစ်အားလုံးကိုလေးအများစု၏ထိပ်တန်း5မှာပြီးဆုံး 1-4) ။
ဝုဒ်ဗိုလ်ကြီးအတွက် 38 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထိပ်တန်း 10s အဘို့, ဗိုလ်ကြီးအတွက် 10th ရာအရပျမှတဆငျ့ဆဋ္ဌမအရပျမှတစ်ဦးအပိုဆောင်းရှစ်ချောရှိပါတယ်။ ဝုဒ်အရှိဆုံးထိပ်တန်း 10s posted ထားတဲ့အတွက်တဦးတည်းကိုအဓိကသူထိပ်တန်း 10 ဦး 13 ကြိမ်အတွင်းကိုလက်စသတ်ရှိရာအဆိုပါမာစတာဖြစ်ပါသည်။
Sexy ဂေါက်သီး: စွဲမက်ဖွယ်ရာ Shots ဓာတ်ပုံ Galleries
ဂျင်မီ Demaret: အရောင်အသွေးစုံသောဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား, 3-Time မာစတာ Champ
နာတာလီ Gulbis ရုပ်ပုံများ
က Tiger Woods ကလပ်ပစ်ခြင်း
အဘယ်ကြောင့် Chi Chi Rodriguez ဂေါက်ကွင်းရဲ့အများစုကနာမည်ကြီးကစားသမားတစ်ခုမှာ Is
မော်ဂန် Pressel စွဲမက်ဖွယ်ရာ Shots
ရေမွန် Floyd ရဲ့ PGA Tour နိုင်ပွဲများ
Kultida Punsawad ဝုဒ်သည်က Tiger Woods '' အမေ
ယောဟနျသ Grisham - အများစုမှာလတ်တလောထုတ်ဝေမှုများ
Pro ကိုရေကူးကန် - ဆယ်ပါးဘိလိယက်သိကောင်းစရာများသင့်အတိုက်အခံကိုသိမနေပါနဲ့
ဝီလျံ C. Quantrill: စစ်သားသို့မဟုတ်လူသတ်မှု?
Delphi Database ဟာ Programming မှတစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
Mardi Gras မှ Related ပြင်သစ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
Coachella 2016 မှာထိပ်တန်း 15 ပေါ့ပ်အဆိုတော်များ
အကောင်းဆုံး Ted Kennedy ကဟာသ
PHP ကိုအတူ Redirect လုပ်နည်း
ယောဟနျသ Schmidt က, ရေကူးကန်ရဲ့ "မစ္စတာ 400"
1998 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: Janzen တဖန် ... Stewart ရဲ့ သာ. ကောင်း၏လာ